Akadeemiyada BBC oo billowday macluumaad loogu talagalay suxufiyiinta - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Anthony Devlin
Akadeemiyada BBC waxay billowday macluumaad bilaash ah oo loogu tala galay saxaafadda iyo adeegsiga luuqadda Soomaaliga. Barta internetka ee bogga Soomaaliga ee Akadeemiyada BBC waxaa diiradda lagu saarayaa ku shaqaynta saxaafadda ubucda u ah BBC, waxaana ku jira qiyamka xagga tafatirka, isticmaalka af-Soomaaliga, xirfadaha saxaafadda.
Najiba Kasraee, tafatiraha akadeemiyada ee baraha caalamiga ah ee BBC-da ayaa tiri "Luuqadda iyo saxaafadda waa kuwo aan kala hari karin. Waxaa muhiim ah in la siiyo saxafiyiinta, kaliya maaha xirfado tababar, balse inay ogaadaan muhiimadda ah in la dhowro heerka ugu sarreeya ee adeegsiga luuqadda saxafiyiinta BBC, taasoo ku salaysan habraacyadeenna ah dhexdhexaadnimo, sugnaansho iyo tabin sax ah"
Barta internetka ee Akadeemiyada BBC Somali oo suxufiyiinta la wadaageyso macluumaad seddex heer oo waaweyn u kala baxa - luuqad, xirfado iyo habka lagu shaqeeyo - ayaa bixinaysa hagidda heerka tafarirka ee BBC iyo qiyamka udub dhexaadka u ah.
Suxufiyiintu waxay heli doonaan agabyada luuqadda ee xaqiijinaya heerka dhexdhexaadnimo iyo sugnaansho, xitaa marka la tarjumo kaddib, iyo marka la abuurayo ama la gudbinayo macluumaad asal ah. Waxay kaloo la wadaagaysaa hanaanka turjumaadda loo maro ee muujinaya khibradda suxufiyiinta BBC Somali.
Tafatiraha BBC Somali, Caroline Karobia, waxay leedahay: "Hawlwadeennada BBC Somali waxay ku dadaalayaan inay dhiiregeliyaan sare u qaadidda mustawaha luuqadda Soomaaliga ee saxaafadda loo adeegsado maanta iyo berri. Barta BBC Academy oo qof kasta si bilaash ah uu ku gali doono ayaa ah qaab wanaagsan oo laga baran karo in si xirfadi ku dheehantahay loo guto saxaafadda iyadoo la adeegsanayo luuqadda Soomaaliga."
Iyadoo dhinacyo badan oo warbaahineed daboolaysa - TV, Raadiyaha, iyo Dijitaal - ayaa barta BBC Academy ee af-Soomaaliga waxay diiradda saari doontaa qaabka tabinta, qoraalka, iyo isticmaalka baraha bulshada.
Boggani waa noocii ugu horreeyay, waxaana lago soo kordhin doonaa qaabab isticmaal oo kale.
Si gaar ah waxaa diiradda loo saari doonaa sidii saxafiyiinta looga caawin lahaa dhinacyada soo saarista iyo tabinta marka uu haysto cadaadis adag oo dhinaca wakhtiga ah.
Macluumaadka cusub oo af-Soomaai ku qoran waa mid ka mid ah 23 luuqadood oo iminka laga heli karo BBC Academy.
Horumarintan ayaa la jaan-qaadaysa yabooha BBC Academy ay ku yaboohayso bixinta taageero la siinayo dhamaan luuqadaha ka baxa BBC World Service - oo ay ku jiraan adeegyada luuqadaha cusub ee billaaban doona, kuwaas oo bilaabi doona soo gudbinta macluumaad, waxayna qayb ka tahay balaarinta BBC World Service.